Kiobà: Na Misy Na Tsia Fanavaozàm-panjakàna, Midika Teknolojia Bebe Kokoa Ny Vola Misimisy Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2014 4:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, čeština , English
Correos de Cuba, kiôska an'ny paositra kiobàna. Sary an'i Victor Manuel tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Ilay fanambaràna toy ny vara-datsaka tamin'ny Alarobia hoe nanapa-kevitra ny governemanta Kiobàna sy Amerikana fa hamerina ny fifandraisana diplaomatika eo amin'ny roa tonta, taorian'ny 56 taona nitondra ranomaso, hafaliana, tahotra, ary tsy fitokisana tamin'ireo Kiobàna manerana ny tany. (Ary hatezerana ihany koa ho an'ireo Kiobàna sasany.) Raha toa ka azo narahana mivantana — nalefa tamin'ny fahitalavitra sy tao amin'ny tranonkalan'ny Trano Fotsy ny kabarin'ny Filoha Obama — tsy maintsy niandry tamim-paharetana kosa ireo tany ivelan'i Kiobà mba hahazo ny dikasoratry ny kabarin'i Raul Castro ka nampakarina tany amin'ireo tranonkalam-baovaom-panjakàna Kiobàna. Ny teny fohy nataon'ny mpifehy ambony an'i Kiobà dia tsy nalefa mivantana satria tsy mahazaka izany ny fotodrafitrasa mangozohozon'ny aterineto ao Kiobà. Tsy mbola hatreto aloha farafaharatsiny..
Tao anatin'ireo fanontaniana an'arivony niainga nanodidina ny aterineto sy ny arabe ao Miami, Havana, ary Washington androany ny fanontaniana momba ny teknolojia. Inona no ho entin'ireny fiovàna ireny ho an'ny fahafahana miditra aterineto sy ny telefône finday ao Kiobà? Hatreto, kely ny finoana. Saingy misy zavatra vitsivitsy mba azontsika raisina avy amin'ny resak'ireo filoha roa ireo—sy ny tsy nolazainy—hatreto.
Vola misimisy kokoa, teknolojia bebe kokoa
Raha toa ireo Tandrefana mpiaro azy io mety hihazakazaka hifantoka amin'ny fomba hidonan'io any amin'ny politikan'ny governemanta sy ny fomba fanao manodidina ny resaka aterineto, ny fiantraikan'ny fanavaozana ara-toekarena omaly eo amin'ny tontolon'ny teknolojia ao Kiobà no mety ho fiovàna manan-danja indrindra ilaina jerena amin'izao fotoana izao. Rehefa betsaka ny vola, maro ireo Kiobàna no ho afaka hividy finday sy hampiasa ny tolotra. Tsy midika izany fa ho afaka hiditra amin'ny aterineto ry zareo – toy ny mitady volamena izany 3G izany ao amin'io nosy io. Saingy noho ny fitomboan'ny fahafahan'ny olona mifandray amin'ny alàlan'ny finday dia hanafaingana ny fiovàna izay efa maka toerana ao Kiobà io . Ho betsaka noho ny taloha, hivezivezy betsaka sy amin'ny fomba malaky ireo vaovao sy ny tsara ho fantatra, izay fahiny dia ny toho-tsofina monja no nampitàna azy. Ary azo inoana fa hitombo ihany koa ny fahafahan'ireo Kiobàna mifandray amin'ireo namana sy fianakaviana any ivelany.
Efa azontsika aroso ihany koa ny hitobahan'ireo kojakoja sy fitaovana teknolojika ao amin'ilay nosy – tena be ny filàna solosaina, finday, “disques durs”, USB ao Kiobà ary tsy mora ny mahita/mahazo azy ireny. Tsy isalasalàna fa hanamora ny fahafahan'ny Kiobàna hahazo kojakoja teknolojika ka hahatonga ny fahafahana mifandray bebe kokoa sy fizaràna vaovao eo amin'ny samy Kiobàna ireo fiovàna omaly ireo.
Ary ny fisokafan'ny fampiasàna renivola dia hanome fahafahana ny Kiobàna maro ihany koa hiditra aterineto avy any amin'ireo hotely fandraharahana amin'ny fandraisana vahiny sy ireo trano fisotroana kafe, izay tsy mbola ny olona rehetra no mahatakatra ny sandany (miainga amin'ny USD $4.50 ary tonga hatramin'ny $12.00 ny ora iray). Tsy hoe hampitombo fotsiny ny isan'ireo Kiobàna sambany vao nampiasa aterineto io, fa koa ny habetsahana sy ny hamaroan'endriky ny vaovao dizitaly mivezivezy ao amin'ny nosy. Mazàna ny lahatsary, mozika, vaovao, ary literatiora no miampita tànana amin'ny alàlan'ny USB, fampihàrana anaty finday ary fomba hafa maivamaivana afaka hitondrana angon-drakitra – misy olona iray manana fahafahana miditra aterineto mitroka lahatsary iray, dia mampiditra azy iny anaty USB, ary manolotra an-tànana manaparitaka azy amin'ireo nàmany izay mijery ilay lahatsary avy eo, sy mandika azy iny indray ary mitsinjara azy ho an'ny nàmana hafa. Tsy tokony hohamaivanina ny lanjan'ireny tambajotran'ny tànana miampitampita ireny, izay antsoin'ilay Kiobana bilaogera, Orlando Luis Pardo, hoe “aterineto ivelan'ny aterineto” ao Kiobà.
Firenena roa, rafi-pitsaràna roa
Sarotra ny handray zavatra betsaka avy amin'izay nolazain'ireo filoha roa ireo mikasika ny politikan'ny fifandraisan-davitra. Taorian'ny nahafantarana hoe ny sazy Amerikàna nataony ho an'ny firenena nandritry ny taona marobe no “nanàkana ny tsy fidiran'ny Kiobàna tamin'ny teknolojia izay nanome hery ny tsirairay eran'izao tontolo izao,” dia nilaza i Obama hoe :
Nomeko alàlana ny fampitomboana bebe kokoa ny fifandraisandavitra eo amin'i Etazonia sy Kiobà. Ho azon'ireo orinasa atao ny mivarotra entana hahafahan'ny Kiobàna mifandray amin'i Etazonia sy ireo firenena hafa.
Miteraka fanontanaiana marobe ity filazàna mahabe fanantenana sangy somary manjavozavo ity — fandraharahana toy inona ilay resahany? Karazan'entana toy inona? Tato anatin'ny taona vitsivitsy, ireo orinasa misahana fifandraisan-davitra, toy ny Verizon sy AT&T dia natosika mba hanalefaka ny faneriterena an'ireo indostrian-dry zareo ho ezaka iray hidirana amin'ny fifampiraharahana amin'ny governemanta Kiobàna. Ary dia nanao dingana ry zareo hatramin'ny nahatongavan'i Obama teo amin'ny toerany. Saingy iray monja amin'ireo sàkana roa io. Ny faharoa dia ny governemanta Kiobàna, izay toy ny firenena tsirairay, mametraka fepetra sy zavatra takiana amin'ireo vahiny mpandraharaha maniry ny hipetraka ao amin'ny taniny.
Ankoatry ny zavatra vitsivitsy maningana, dia afaka mifandrfay amin'ny governemanta Kiobàna ny orinasa vahiny rehefa manaiky ny handrotsaka ny 51 isanjaton'ny fanànany ao amin'ilay nosy mba ho an'ny governemanta Kiobàna.Vokatr'izay, ny dikany dia hoe mbola an'ny governemanta Kiobàna daholo ny ankamaroan'ireo fandraharahàna vahiny. Sarotra ny haka sary an-tsaina hoe hiova tanteraka ny politikan'ny fanjakàna Kiobàna mikasika an'io. Ny tenin'i Obama dia manoso-kevitra ny hoe mety ho ampahany tao anatin'ny fifampiraharahan-dry zareo io. saingy ny hany fanamarihan'i Raul Castro mikasika ilay olana dia toa nilaza fa mbola any amin'i Obama ny baolina. Tsy niresaka ny hanova ny politika Kiobàna momba ny teknolojia na ny fotodrafitrasa ny filoha Kiobàna. Nolazainy fotsiny fa “hiantso ny governemanta Amerikàna izy hanaisotra ireo sàkana manelingelina … ny fifandraisan-davitra.”
Mbola betsaka zavatra tsy azo antoka tavela. Tsy vitan'i Obama samirery ny handrava ny politika manontolon'ny governemanta Amerikàna mamepetra ny fifandraisana sy ny varotra iarahana amin'i Kiobà — araka ny nomarihan'ny filoha roa tonta, voarakitra ao anaty lalàna ilay fanaovana ankivy, ka ny Kaongresy irery ihany no afaka hanova azy. Ary na dia nitondra teny niaro ireo mpitondra avy amin'ny andaniny sy ny ankilany aza i Obama mba handrosoana sy hamelàna izay lova navelan'ny “colonialisme sy ny communisme”, tsy mbola mazava ny fomba hisehoan'izay rehefa ampiharina. Sarotra ny miala amin'ny mahazatra— ary ao anatin'ny vanimpotoana dizitaly dia tsy mora atsangana toy ny tamin'ny 1961 ny fahatokisana.